टुक्रा इजेभ्स्क बन्दुक। इजेभ्स्क shotguns
नागरिक र सेवा हतियार गर्न धातु र ईन्जिनियरिङ् उद्योग देखि - इजेभ्स्क राइफल धेरै वर्ष जो निरन्तर फरक क्षेत्रहरू मा नवीनतम घटनाहरु प्रदान गर्दछ देश, एक ठूलो उद्यम उत्पादन भएको छ। यसलाई पहिले नै त्यो वर्ष समयमा त्यहाँ बारेमा 7,50,000 बन्दुक जारी बोट भरोसा प्रेरित!
बन्दुक को प्रकार
इजेभ्स्क कारखाना smoothbore मोडेल को एक विस्तृत श्रृंखला शिकार मा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रदान गर्दछ, र लड समयमा। Shotguns इजेभ्स्क यांत्रिक प्लान्ट एक विस्तृत विविधता मा प्रस्तुत:
सानो खेल, साना खेल शिकार लागि प्रयोग एकल-barreled एकल शट। यो हतियार inflection एक प्रकार छ र एक पटक राम्रो शट बनाउन मौका दिनुहुन्छ।
Dvuhstvolny डिजाइन - यो ठूलो खेल शिकार गर्ने मौका छ। यी मोडेल मा, बैरल ठाडो वा तेर्सो अवस्थित हुन सक्छ।
शान मोडेल स्वयं recharged गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले प्रत्यक्ष बारूद र रबर buckshot संग प्रयोग गर्न सकिन्छ।
आत्म-लोड एकल-बैरल बन्दुक, स्वचालित RECHARGE छ आगो को एक उच्च दर छ, त्यसैले तिनीहरू शिकार सार्दा खेल र जनावर लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
शिकार लागि बन्दुक
शिकार राइफल्स इजेभ्स्क बोट ग्राहकहरु संग धेरै लोकप्रिय छन्। खेल र व्यावसायिक शिकार देखि आत्म-रक्षा गर्न - यो बोट व्यापक विभिन्न क्षेत्रहरू प्रयोग गरिन्छ जो देश, मा हतियार को सिंहको शेयर उत्पादन हो। सबै भन्दा लोकप्रिय मोडेल सांसद-27, सांसद-133, सांसद-153, आईएल-54, सांसद-43 छन्। आफ्नो लोकप्रियता को गोप्य - एक किफायती लागत र बन्दूक, जमानत, कार्यान्वयन सजिलो विवरण र मोडेल श्रृंखला को स्पेक्ट्रम को उपलब्धता मा। कारण विश्वसनीय र सुरक्षित प्राप्त गर्न उच्च गुणवत्ता इस्पात मोडेल को उत्पादन गर्न, तिनीहरूले शिकारी द्वारा ल्याए गर्न सकिन्छ। एक सिरियल विधानसभा विभिन्न कम को डिजाइन अनुकूलन परिणामस्वरूप, कारखाना मा कमी पनि छ।
एकल-इजेभ्स्क राइफल सांसद-18M-एम पहिलो प्रयास यसको लक्ष्य मारा प्रयोग गरिन्छ जो क्लासिक शिकार साँचो connoisseurs, गर्न अपील गर्नेछ। डिजाइन, विश्वसनीयता र सुरक्षा को सादगी - यो मोडेल के distinguishes भन्ने, विश्वव्यापी सर्वोत्तम बिक्री। परिष्कृत सन्तुलन खेलकुद तीव्र सुनिश्चित र सजिलै जन्माई र मजबूती विशेष लीवर बन्द गर्छ। को ट्रिगर संयन्त्र बक्समा स्थित छ, त्यसैले सजिलो र सुरक्षित बन्दूक सञ्चालन गर्न। सांसद-18M-एम एक दमा संग आपूर्ति गरिएको छ वा परस्पर नलिका को जोडना साथ निर्मित हुन सक्छ।
यी इजेभ्स्क बन्दुक शिकार वा निशाना लागि पूर्ण छन्। नवीनतम मोडेल कक्षाहरू लागि बैरल थूथन र रिब दुई झिंगा संग प्वालहरू offsetting द्वारा पूरक हुन्। यो मोडेल सुधार Ergonomics र थकान बिना दीर्घकालीन व्यायाम प्रदान गर्दछ घाँटी-आघात अवशोषक उपस्थिति ध्यान ड्र। विकासकर्ता प्रयोगकर्ताहरूले शूटिंग मा सबै भन्दा राम्रो परिणाम देखाउन सक्छन् कि, बैरल र परस्पर दमा को लम्बाइ धेरै ध्यान। यो संशोधन एक बेदखलदार छ, र निकल-जलप बक्से र ओखर काठ को बट को प्रयोग यसको डिजाइन धेरै खरीदारों अपिल गर्ने सम्भावना छ।
यी Izhevskie बन्दूक महिला र युवा तीर द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ तिनीहरूले विशेष आफ्नो शरीर को विशेषताहरु पूरा डिजाइन रहे हो। उत्पादन मा पाखुरा र बट, र वजन कमी को आकार घटाउने केंद्रित। विशेष सँगै एउटा सानो कैलिबर संग टाउको-अवशोषक सान्त्वना गोलीबारी प्रदान गर्दछ।
यो डबल-barreled बन्दूक इजेभ्स्क बोट, जसमा ट्रंक ठाडो छ। यी मोडेल पेशेवर यो व्यवसाय मा संलग्न छन् जो धेरै शिकारी को आदर कमाएका छन्। यो मोडेल को उत्पादन को मात्रा उदेकलाग्दा छन् - 30 वर्ष मा विश्वसनीयता, उत्कृष्ट ब्यालेन्स, स्थिर प्रदर्शन र सरल निर्माण को एक उच्च स्तर जो करिब आधा एक लाख प्रतिहरू उत्पादन। यस मामला मा, मोडेल को परिचालन र प्राविधिक विशेषताहरु समकक्षों उच्च मूल्य खण्ड भन्दा धेरै राम्रो छ। शेयर र forend ओखर र उच्च गुणस्तरीय बीच काठ बनेको छन्।
यो विभिन्नता एक प्रतिस्थापन बैरल एकाइ गोलो सर्पिल ब्यारेल संग पूरक हुन सक्छ। प्रतिस्थापन एकाइ बस तपाईं को उच्च शुद्धता सुनिश्चित जो ठूलो खेल, शिकार गर्न अनुमति दिन्छ खेल शूटिंग बारूद। स्वाप बैरल एकाइ केन्द्र तितर-बितर दुवै व्यारेल को स्थिति समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो संरचना छ। दृष्टि खुला दुवै तेर्सो र ठाडो समायोज्य छ।
सांसद-27EM-1 C, "स्पोर्ट" र "जुनियर"
यी shotguns इजेभ्स्क बोट सार्वभौमिक र स्पोर्टी शैली बनेको छन्। तपाईं शिकार तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्, र खेल शूटिंग को समयमा गर्न सक्नुहुन्छ। मोडेल यसको प्रदर्शन अप बराबर थियो भनेर डिजाइन गरिएको छ। Patterning विभिन्न परस्पर दमा ट्यूब को प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँछ।
डबल-barreled बन्दूक सांसद-27m «जुनियर» प्रकाश र सघन, शिकार र कौशल शूटिंग, वा यो सिक्ने लागि उपयुक्त छ। मोडेल को मुख्य आयाम यी प्रयोगकर्ताहरूको विभाग को शारीरिक मापदण्डहरू फिट त निर्माता, महिला र बच्चाहरु यी उत्पादनहरु orients। जूनियर मोडेल को विशेष सुविधाहरू हल्का निर्माण बोल्ट बक्स, यसको सानो कैलिबर अन्तर्गत adaptability, बैरल लम्बाइ कम छ, पोल-आघात हो। यो सबै यो इजेभ्स्क बन्दुक काम गर्न सजिलो बनाउँछ। फोटो देखाउँछ कि यो गर्न सक्नुहुन्छ वयस्क र बच्चाहरु दुवै फायर।
यो डबल-barreled बन्दूक खेल र शिकार को एक श्रृंखला मा आधारभूत मोडेल छ। यो नयाँ तत्व संग संयोजन मा प्राविधिक डिजाइन समाधान embodies। कारण यो निम्न परिणाम हासिल गरेका थिए:
सफाई र स्नेहन सजिलै र चाँडै बाहिर छन् त ट्रिगर संयन्त्र, को अलग गर्न सकिने एकाइ मा स्थित छ।
रिसीभर एकाइ जोडना र फ्लोरोसेन्ट अगाडि दृष्टि, कुशल र सही सुटिङ अनुमति ventliruemaya एक compensating प्वालहरू छ।
को बट Ergonomic छ र हात अन्तर्गत ह्यान्डल मा एक protrusion छ। Nape-आघात एडी सोच बिना पनि प्लास्टिक, त्यसैले सहज शूटिंग छ।
इजेभ्स्क shotguns सांसद-39 - विभिन्न प्रकारका को खडा मा शूटिंग को लागि बनाईएको हो कि एक बहुमुखी मोडेल छ। राउन्ड पीठ लागि मोडेल शिकार लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ upland खेल, मा - र खाडल लागि जलपक्षी। यो मोडेल शक्ति बन्द एकाइ दीर्घायु योगदान जो अलग छ। odnopuskovogo संयन्त्र शट को एक अनुक्रम स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर र forend उच्च-नट बनेको छन्।
इजेभ्स्क टुक्रा राइफल्स - यो सधैं प्रत्येक मोडेल को विश्वसनीयता र सुरक्षा को संयोजन छ। एमआर-43 तेर्सो बैरल disposed अलग छ। मजबूत डिजाइन ब्रेकर द्वारा विशेषता, विचारशील र sear र ट्रिगर ताला। राम्रो सन्तुलन धन्यवाद छिटो र लक्ष्य सजिलो छ। बन्दूक एक शास्त्रीय संरचना zavtora, दुई ग्रेनेड Perde हुक फ्रेम मा बन्द गरिएको छ जो छ। bores र Chambers चढाना जंग जोगाउन मद्दत गर्छ।
एमआर-43KH - यो मात्र ट्रिगर एक डबल-barreled बन्दूक, आम-उत्पादन हो जो छ। बोर्डहरू मोडेल समान छ बाह्य Kurkov र ओभरले कारण प्राचीन हतियार, यो मामला मा यो फरक गुणस्तर, विश्वसनीयता र स्थायित्व छ। उहाँलाई सुरक्षित माध्यम व्यवहार:
विचारशील Kurkov, सुरक्षित छन् खुलेको छ।
soaking बिना ट्रिगरहरू फायर भएको impossibility सुनिश्चित कि गोलीबारी संयन्त्र को डिजाइन सुविधाहरू।
हथौडा द्वारा बाह्य प्रभाव मा एक सम्भव शट समाप्त जो निर्माण hammers, cocked।
बन्दूक सांसद-133 इजेभ्स्क बोट गुणन बन्दूक पुन: लोड गर्न चार्ज छन्। यो हतियार शिकार र आत्म-रक्षा दुवै लागि एक प्रभावकारी र सुविधाजनक विकल्प मानिन्छ। कारतूस संग उत्कृष्ट काम 12 कैलिबर, साथै एक 76 मिमी कोठामा संग सुसज्जित। बोल्ट र बैरल युग्मन ताला लगाईएको को बल र स्थायित्व गर्न प्रमुख छ र शट को रिसीभर unloads। रिसीभर सिर्जना गर्न प्रयोग एल्यूमीनियम मिश्र धातु। को ट्रिगर फरक को सुरक्षा प्रणाली:
शट देखि सुरक्षा, को सटर पूर्ण बन्द गरिएको छ भने;
जो शट अघि शटर को नगरिएका अनलक समाप्त लक;
गैर-स्वचालित सुरक्षा कि ट्रिगर ब्लक को उपस्थिति।
टुक्रा बन्दूक इजेभ्स्क बोट सांसद-133K5राउंड्स धारण जो अलग गर्न सकिने बक्स पत्रिका, छन्।
एमआर-153 र एमआर-153C
यी आत्म-लोड राइफल, आवेदन को एक विस्तृत क्षेत्र छ जो - खेल शूटिंग गर्न शिकार देखि। आज यो 12 गेज लागि कक्ष मात्र घरेलू नमूना अर्धस्वचालित मोडेल छ। डिजाइन सुविधाहरू पाउडर ग्याँसहरु हटाउन सुझाव। सटर को बैरल सीधा पालना, त्यसैले लक बलियो र टिकाउ। बैरल पाङ्ग्रा एल्यूमीनियम मिश्र धातु को आधार मा उत्पन्न, र भागहरु को पाउडर ग्याँसहरु, chromate उपचार जो प्रभाव लागि। एक वाल्व र सिर्जना गर्न पिस्टन छल्ले स्टेनलेस स्टील प्रयोग।
एमआर 153 को संशोधन अभ्यास गोलीबारी समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। बन्दूक एक उच्च गोलीबारी दर, बारूद को विकल्प को मामला मा विश्वसनीयता र लचीलापन छ। यसबाहेक, आधुनिक मोडेल थप सेवा तत्व शूटिङ लागि आवश्यक छन् सुसज्जित छन्।
आईएल-27m - व्यवसायीक र एमेच्योर दुवै गर्न अपील एक क्लासिक। शेयर र forend मोडेल उच्च गुणवत्ता बीच वा ओखर सिर्जना गर्दै छन्, र ग्राहकहरु सजिलै तिनीहरूलाई उपयुक्त विकल्प फेला पार्न सक्नुहुन्छ परिमार्जनहरू को एक विस्तृत श्रृंखला बीच। एकल-बन्दूक आईएल-43 - यो पनि प्रयोग र किफायती मूल्य को सजिलो को ध्यान आकर्षित जो क्लासिक हतियार, छ।
डबल-barreled मोडेल आईएल-39 खेल शूटिंग वा शिकार मा प्रशिक्षण समयमा उपयोगी छ। IZH-27m को डिजाइन समान आधारभूत तंत्र। Odnopuskovoy संयन्त्र तपाईं शट को अनुक्रम परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ।
दमास्कस इस्पात - यो पौराणिक कथा को इतिहास
सबै भन्दा ठूलो जहाज। संसारमा सबै भन्दा ठूलो जहाज: तस्बिर
पोत यन्त्र। जहाजहरु र तिनीहरूको आधारभूत तत्व को सामान्य व्यवस्था
उद्योग: के, वस्तुहरू, उत्पादन, अर्थव्यवस्था को मूल्य
JSC "उत्तर-पश्चिमी ढुवानी कम्पनी": इतिहास। सेवाहरू समीक्षा
सान मारिनो जनसंख्या: आकार र 2016 को लागि घनत्व
आफ्नो हातले शिफन को स्कर्ट? सजिलो!
बाल्टिक सागर - गुणस्तर परिवार बिदाको लागि सही ठाउँ
कम्प्युटर विज्ञान: सत्य तालिका। सत्य टेबल निर्माण
फ्रांज Lefort: छोटो जीवनी
विश्लेषण। Contraindications and harm
पहिलो विश्व युद्ध
कसरी आफ्नो Android स्मार्टफोन र ट्याबलेट, को एलजी, "सैमसंग", "लेनोभो" मा स्क्रिनसट लिने?
जीवित कोठा को भित्री मा frescoes: प्रकार, स्थापना
राम्रो हुक्का:, समीक्षा कसरी चयन गर्न
हेज हग कसरी बनाउने लागि धेरै विकल्प प्राकृतिक सामाग्री बनेको